Kedu mgbe US ga-akwụ ụtụ ihu igwe maka bọmbụ ndị ahụ ha tụbara? : Martin Vrijland
Kedu mgbe US ga-akwụ ụtụ ihu igwe maka bọmbụ ndị ahụ ha tụbara?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 11 September 2019	• 2 Comments
isi mmalite: stripes.com
O di nwute nke ukwuu maka okwu ịhụ ka US si na-agbasa bọmbụ ya n'enwetaghị ntaramahụhụ ka ndị ụwa nọ n'okpuru arụmụka ụgha nke "okpomoku zuru uwa n'ihi oke CO2 na ikuku'ebubo ụtụ isi dị elu. O juru nganga telegraph n'ụtụtụ a, otú ike ikuku nke Combined Joint Task Force (nke a gụnyere Netherlands) ga-esi jiri bọmbụ atụ ihe karịrị 40 gbawara otu agwaetiti na Iraq. Ndị na-alụ ọgụ IS zoro n'agwaetiti ahụ.
Anyị nwere ike ịbụ ebe a ọzọ na-agbara ọgbaghara gị na mgbasa ozi ụgha na-agha ụgha iji nye echiche na a ka na-alụ ọgụ megide ndị agha onwe-IS a zighachi akwụkwọ nnọchiteanya nke chọrọ oke agha sham na Syria. Agha ahụ dị na Syria dị mkpa iji meziwanye mmekọrịta dị na ogbo nke esemokwu mba ụwa n'etiti ndị ike dị elu. Mụ na gị ga-enwerịrị ike ikwenye na mba na-alụrịta ọgụ, nke mere na anyị ga-ekwenyere n'omume a na - enweta ihe odide ochie ahụ.
Gịnị bụ 'akwụkwọ edemede' ahụ? Ederede akwukwọ a na polarity ma ọ bụ, yabụ, sọrọ mmadụ abụọ. Ọ bụ edemede nke sochiri amụma okpukpe, nke ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị agha ha duuru ụwa gaa agha ikpeazụ nke ụwa. Agha ụwa ikpeazụ ahụ ga-abụrịrị ihe dị na Jerusalem. N’ezie nke a agaghị eme ozugbo echi, n’ihi na ozugbo ị malitere ịhụ ihe odide ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta na alaeze ukwu nke Alakụba ga-ebu ụzọ guzo maka nke a. Nyocha m emeela ruo ọtụtụ afọ mere ka m kwubie na nke a nwere ike ịbụ alaeze Ottoman. Ala eze Ottoman nwere ike ịghaghachi na 2023, na ntinye Turkey nke EU dị ka ndị na-atụ anya. Ana m adụ gị ọdụ n'ọnọdụ ahụ isiokwu a guo ya nke oma, nihi na anam akowa na nchebara echiche a. Agha dị na Syria nyere ndị agha Turkey ala mara mma maka ngwa agha ha dị ọhụrụ ma gosikwa etu esi emebisị ntutu mbụ (ma ọ bụ: mgbawa) na mmekọrịta dị n'etiti US na Turkey.
B was Ọ bụ onye iro mepụtara nke achọrọ maka agha a nke enwere ike ịnwale ụdị ngwa ọgụ ọhụụ na ebe akara nke edemede nna ya ukwu bịara pụta. Turkey bụ ike ụwa na-apụta, US bụ nnukwu alaeze ukwu nke Zaịọn adalata. Eleghi anya ọ gaghị adị anya tupu ndue Amerịkà, nke dabere na dollar na ike ndị agha, abịa na njedebe. Ma ka mmadụ niile lekwasịrị anya na azụmaahịa azụmahịa dị n'etiti US na China na nsonaazụ nke a ga - abụ agha nkịtị, Turkey na - enweta ohere iji tozuo ụlọ ọrụ mmepụta-agha ebe onye ọ bụla na - elele ndị dike abụọ ahụ na - alụ ọgụ. Agha a na Syria nyere Turkey, na mgbakwunye na ịnwale ike ọgụ ya na Northern Syria, ngwa agha nke 'onye gbara ọsọ ndụ', nke nwere ike (ma ka nwere ike) itinye nrụgide na EU.
In isiokwu a site na Brandon Smit ị nwere ike ịgụta azụ etu agha dị n'etiti US na China si bụrụ akụkụ nke edemede ukwu. Ike nile nke ụwa na-arụ ọrụ site na edemede nke agha onwe ha na "esemokwu siri ike n'ọhịa a na-ahụ anya," na nzuzo na otu ebumnuche ya na ebumnuche kasịnụ nke ọchịchị ụwa nke ga-esite n'ọgba aghara nke agha ụwa ikpeazụ. Mgbagha a tụrụ anya na Alaeze Ukwu Ottoman, ya mere, ga-adị nwa oge ma ọ bụ naanị na-eso akpata ọgba aghara zuru ụwa ọnụ nke a ga-eme ka agha ụwa nke atọ a.
A ga - aghota nkwupụta ndị a dị n'elu nke ọma ma ọ bụrụ na ị gụọ ihe ndị ahụ dị n'okpuru njikọta anụnụ anụnụ.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: telegraaf.nl, alt-market.com
Anyị na-aga ịmalite! 2019 nwere obi ụtọ ma dị mma nye ndị niile na-agụ ya!
Boris Johnson (nna nna Ottoman) nwere ike ibido ọgba aghara na Europe nke ga-ebuli Alaeze Ottoman?
Ihe ojoo Brexit aburula uzo atumatu
Tags: 40, bombs, Ejikọtara Ejikọtara ọnụ, Europe, is, ikuku, Nederland, uda, VS
11 September 2019 na 14: 46
Ọ bụ ihe nwute ma ọ bụ ihe iwu na ihe niile
n'okpuru aha Defence
ma ọ bụ akpọrọ nchekwa ụwa
Shipgbọ mmiri dị mma na-eji tọn Gas nke 200 (= 200.000 lita) n'ụbọchị, mgbe ụfọdụ, karịa.
Inwere ike ịlele ihe ndị na-ebu ụgbọ elu na-eri kwa ụbọchị, ọbụlagodi na ha dị ntakịrị
eme. lee n'okpuru ụgbọ-mmiri na ndị ọzọ
16 September 2019 na 09: 37
Anyị na-atụfu na ihe mgbako ọhụụ. Mgbe ahụ anyị nwere eziokwu ọhụrụ, eziokwu ma ọ bụ eziokwu ... Nhọrọ bụ nke gị!
" NOS na RTL na-elebara omimi miri emi anya iji mepụta ihe omimi nke aka ha
Ndi 911 bu oru ime? De Telegraaf nwere azịza nye ajụjụ gị niile! »
Nleta ha: 4.318.330
Ajuju ParaVisie Magazine na Martin Vrijland banyere akwukwo ya
Nnyocha imi coronavirus covid-19 dị ezigbo ụfụ ma enwere ike iburu DNA gị
Etufuola agha? Ka ànyị ga-eteta ma mee ihe?
Coronavirus covid-19: ihe anyị anaghị anụ banyere Maurice de Hond na Willem Engel, akụkụ nke 2
Coronavirus, udu ahihia na ihe omume amụma ndị ọzọ na-emezu
hans coudyser op Ajuju ParaVisie Magazine na Martin Vrijland banyere akwukwo ya
SalmonInClick op Etufuola agha? Ka ànyị ga-eteta ma mee ihe?
Martin Vrijland op Etufuola agha? Ka ànyị ga-eteta ma mee ihe?
SalmonInClick op Nnyocha imi coronavirus covid-19 dị ezigbo ụfụ ma enwere ike iburu DNA gị
Riffian op Nnyocha imi coronavirus covid-19 dị ezigbo ụfụ ma enwere ike iburu DNA gị